SOOMAALIDA NORWAY OO DAD-DILNIMO LAGU EEDEEYEY
SomaliTalk.com | Yurub | Jan 18, 2005
Soomaalida Norway oo Lagu Soo Eedeeyey Dhaqan Xumo....
"Dakhli liita. Waxbarasho hoosaysa. Baagamuuddo badan. Dhallinyaro danbiilayaal ah. Kuwii wax caawinjirey oo khaati ka taagan. Markay Norway imaanayeen waxay u qabeen inay Jannadii soo galayaan. Qaarbadan oo soomaali ah waxayba soo galeen Cadaabtii".
Hadalkaas macnayaasha badan waxaa ku bilaabay joornaalka ugu weyn uguna afdheer Norway, ee Aftenposten, isagoo tilmaamaya dadka soomaalida ah ee deggen Norway.
Abdirahman Ismacil & Walid A. Osman | Sawirada ay qaaday jariidada Aftenposten
Weerarka xagga saxaafadda ah ee lagu hayo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway ayaa noqday mid kasoo daraya, gar iyo gardarraba.
Jariidadda aadka loo akhristo ee (Dagbladet) ayaa iyaduna soo qaadday weerarkeeda iyadoo soo gudbinaysey Diraasad uu sameeyey "Xafiiska Dhexe ee Tirakoobyada" ee Norway.
Waxay cinwaan ka dhigatay “Soomaalidu way danbi badanyihiin” waxayna ku bilowday:
"Soomaalida Norway waa kuwa ugu yar xagga la qabsiga (integration), marka loo eego ajnabiga kale oo dhan. Falal-danbiyeed badan oo is daba joogey oo sannadihii lasoo dhaafay ka dhacay Norway ayuu qofka danbiga geystey wuxuu noqonayey Soomaali!"
Sidaas ayay qoraalkeeda ku bilowday jariidaddaasi.
Haddana waxay is weydiisey: Oo ma runbaa in Soomaalidu ka danbi badanyihiin dadka kale ee ajnabiga ah?
"Xafiiska dhexe ee Tirakoobyada" ee dalka Norway "Statistisk Sentralbyrå" warbixin uu soo saaray wuxuu ku sheegay in 5.1% (boqolkiiba shan) dadka Soomaalida ah ee Norway ay ahaayeen kuwo la ciqaabay sannadkii 2002(ganaax ama xarig). Dadka Norwejiyiinta ah iyaga waxay tiradaasi ahayd 1.35% oo kaliya (boqolkiiba hal iyo xoogaa)
Isla sannadkaas waxaa la xukumay dad soomaali ah oo gaaraya 272 qof:
39 qof waxaa lagu xukumay Rabshado gacan ka hadal ah (violence).
144 qof waxaa lagu xukumay Maan dooriyeyaal (Drugs)
89 kalana danbiyo madani ah (sida deyn la bixin waayey)
Isagoo sii wada diraasadiisii Soomaalida wuxuu Xafiisku sheegay:
· Tirada dadka Soomaalida ah ee jooga Norway ayaa ah (15.586). Dadkaas intooda badan (12.166) waa dad ka soo haajirey soomaaliya (first generation), halka inta kale oo ah (3420) ay yihiin kuwo ku dhashay Norway.
· Dhammaantood waxay Norway yimaadeen 15-kii sano ee ugu danbeysey, weliba in ka badan 60% waxay yimaadeen 5-tii sano ee ugu danbeysey. Markii saddex meelood loo qaybiyo hal meel ayaa haysata baasaboorka Norway.
· Ragga ayaa dumarka ka badan, 50% dadkaas ka mid ah da'doodu way ka yartahay 20 sano.
· 75% waa baagamuuddo (shaqo la'aan)
· Sannadkii 2003 ayay soomaalidu bilaabeen inay danbiilayaal noqdaan. Waxaa sannadkaas lasoo dacweeyey 864 qof oo Soomaali ah.
Haddaba markii la isweydiiyey sababaha ka danbeeya in Soomaalidu ay noqdaan "daddil" ama danbiilayaal, ayuu "khabiir" ka tirsan "Xafiiska dhexe ee Tirakoobyada" ayaa arrintaas sabab uga dhigay faqriga iyo shaqo la'aanta ay soomaalidu ku jiraan ama ka yimaadeen.
1. Mr. Lars Østby ayaa wuxuu yidhi: "Haddii qofku faqri ku noolyahay, waalidkiisna ay yihiin shaqo la'aan, isla markaana aanu bulshada dhexgelin, waxaa hubaal ah in uu danbiile noqonayo"
Soomaalida Norway guud ahaan sababahan waa laga wada helayaa. Ayay jariidaddu ku dartay.
2. Sabab kale oo ay xuseen ayaa ah in soomaalidu ay yihiin kuwo dalka ku cusub oo aan weli bulshada la qabsan. "qodob kale oo muhiim ah ayaa wuxuu yahay in Soomaalidu ay yihiin dad dalka dhawaan soo galay. Vitnamiyiinta ayaa sidaasoo kale ahaa markay dalka ku cusbaayeen. 15 sano muddo hadda laga joogo xaaladdan oo kale ayay Vitnamiyiintu ku sugnaayeen" Lars Østby ayaa yidhi.
Mohamed Nuur, Abdirahman Ismacil, Walid A. Osman | Sawirada ay qaaday jariidada Aftenposten
Saxaafadda Norway siday u dhantahayba waxay buunbuunisaa ceebaha Soomaalida (weak points) waxayna taasi abuurtay in shacabka Norway oo runtii ah dad masaakiin ah ay u arkaan in dadka soomaalida ahi ay yihiin "khatar". Haddii aad baska soo fuushid oo laguu garto inaad soomaali tahay, dadka oo dhan kor iyo hoos ayay kuu fiirinayaan, qaarkoodna inay baska ka degaan baaba laga yaabaa. Waxaad u muuqataa nin siduu "Qaad" u ruugayey maskaxdiisa wax u dhimmanyihiin. Carabta ama muslimiinta kale waxaa looga baqaa inay wax qarxiyaan, laakiin adigu hoosta ayaad "toorrey dheer" ku wadataa. Wax naxariisa ma taqaanid, in lagu xiro ama aad dhimatidna macne weyn kuuma lahan, illayn haddeerba "cadaab" baad ku jirtaaye. Dadku waxay baska u raacaan shaqadooda, adiguse waxaad u socotaa xafiiska cayrta laga qaato ama meesha ay ku yaalliin makhaayadaha soomaalidu, qaadkana iyadaa laga helaa.
Mid ka mid ah siyaasiyiinta ajnabiga neceb (Vidar Kleppe) wuxuuba yidhi: "waa in soomaalida la celiyo!" Oo xaggee loo celiyaa? Maxayse awal soo dooneen? (Aftenposten) ayaa is weydiisey.
Sargaal sare oo ka tirsan Xafiiska Shaqada ee Norway (Aetat) oo lagu magacaabo “Leif Magnus Skjevinger” ayaa hadda ka hor isna ku dhawaaqay in soomaalidu ay yihiin "mashaqaystayaal" wuxu yidhi: "Shaqo ma aadaan ee waxay jecelyihiin inay meelahaas is dhoobaan, oo makhaayadaha hadba mid fariistaan".
Inkasta oo la mucaaraday dad badanna ay hadalkiisii raddiyeen, haddana markii soomaalidu wada hadlayaan waxay dhahaan hadalkaas waxbaa ka jira.
Jariidadda Dagbladet waxay soo taxday ilaa 11 fal danbiyeed oo dil, kufsi, dhac iyo waxyaabo kale isugu jira, oo dhammaantood soomaali lagu eedeeyey. Falalkaasi waxay dheceen in ka yar 3 sannadood.
Haddaba su'aashu waxay tahay: Goorma ayay saxaafadda Norway joojinaysaa dagaalka dicayadda ah ee ay ku hayso jaaliyadda soomaaliyeed ee martida ah?
Su'aasha taas ka sii muhiimsan ayaase ah: Goormay soomaalidu iska daynayaan ceebahaas lagu eedaynayo ee sumcaddoodii dhaawacday? Haddii aysan iska daynaynse goormay helayaan cid xuquuqdooda u doodda oo ka celisa dicaayadaha noocaas ah?
» Maxkamada USA: Soomaaliya dadka waa loo tarxiili karaa
» Canada: Dhoofintii Nin Soomali ah oo La Baajiyey
» Newzealand oo Laga Waayey Calanka Soomaaliya
Dhammaan ka akhri halkan.... Guji.. Jan 13